Salaan adblock isticmaale…
Waxay umuuqataa inaad waxyar lunsan ...
Buugaagta Nazi Germany
Ereyga Nazi-ga ee Jarmalka - Adolf Hitler
Erey-bixintii Nazi Jarmalka - xukunkii hore ee Nazi
Ereyadii Naasiga Jarmalka Jarmalka - nolosha iyo shaqada
Ereyga Naasiga ee Jarmalka - asalka Naasiyiinta
Xarafka Naasiga Jarmalka - siyaasadaha isirka
Nasaarada Jarmalka Jarmalka - wadada dagaalka
Naqshaddii Nazi-ga ee Jarmalka - Weimar Republic
Erayadii Nazi Nazi
Dukumentiyada Nazi Germany
Su'aalaha Naasaha Jarmalka Jarmalka
Xusuus-qorka Nazi Germany - tirooyinka anti-Nazi
Xusuus-qorka Nazi Germany - dhacdooyinka 1918-23
Xusuus-qorka Nazi Germany - dhacdooyinka 1924-32
Xusuus-qorka Nazi Germany - dhacdooyinka 1933-39
Xusuus-qorka Nazi Germany - kooxo
Xusuus-qorka Nazi Germany - fikradaha
Xusuus-qorka Nazi Germany - hoggaamiyeyaasha
Xusuus-qorka Nazi Germany - shuruudaha iyo fikradaha (I)
Xusuus-qorka Nazi Germany - shuruudaha iyo fikradaha (II)
Xusuusta xusuusta Nazi Germany
Su'aalaha Nazi Germany - siyaasadaha dhaqaalaha
Su'aalaha Nazi Germany - Hitler
Qiimeynta Nazi Jarmalka - nolosha iyo shaqada
Su'aalaha Nazi Germany - siyaasadaha midab-takoorka
Qufulka Nazi Jarmalka - waa dowladdii Nazi
Koofiyadaha Nazi Jarmalka - NSDAP
Su'aalaha Nazi Germany - wadada dagaalka
Koofiyadaha Nazi Jarmalka - Jamhuuriyadda Weimar
Naqshadii Nazi Jarmalka
Mawduucyada Nazi Jarmalka
Naasigii Jarmalka ee yuu ahaa
Ereyga Naasiyiinta Jarmalka - fikradaha
Ereygii Nazi-ga ee Jarmalka - dadku
Erey-bixinta Nazi-ga Jarmalka - meelaha
Erayadii Nazi Jarmalka
Sheekada ah Nazi Jarmalka ayaa layaabay oo argagax geliyay malaayiin dad ah. Waxay ku bilaabatay guul darrooyinkii Weimar Republic waxayna ku dhammaatay naxdintii Dagaalkii Labaad ee Adduunka iyo Holocaust. Inta udhaxeysa, Naasiyiinta waxay saameysay malaayiin dad ah waxayna badaleen habka taariikhda casriga ah.
Naasiyiinta waxay ahaayeen koox wadaniyiin ah oo xagjir ah kuwaas oo sameystay xisbi siyaasadeed u gaar ah 1919. Waxaa Hogaamiyay Adolf Hitler, oo ah hay'ad hore oo ka soo shaqaysay Dagaalkii Koowaad ee Adduunka, Xisbiga Nazi ayaa weli ah mid yar oo aan waxtar lahayn inta badan 1920s.
Bilowga Depression Great iyo saamaynta ay ku reebtay Jarmalka waxay arkeen Hitler iyo Naasiyiinta oo hela taageero dheeri ah. Naasiyiintu waxay isu soo bandhigeen sidii ikhtiyaar cusub oo ikhtiyaar u ah dadka reer Jarmal ee quus taagan. Si kastaba ha noqotee, wax yar oo cusub oo ku saabsan Hitler iyo naasiga, si kastaba ha noqotee. Intooda badan fikirkooda - awooda dowladeed, talisnimada, qaran jaceylka, Darwiniyanimada bulshada, isir nacayb, dhaqan millatari iyo guushii - fikradaha kuwii hore, ma aha mustaqbalka.
1930, Naasiyiinta waxay noqdeen xisbiga ugu weyn Jarmalka Reichstag (baarlamaanka). Taageeradan ayaa gacan ka geysatay magacaabista Adolf Hitler jagada Janaayo 1933.
Hitler iyo taageerayaashiisa waxay qabteen xoog aan badnayn 12 sano laakiin saameyntooda Jarmalka waxay ahayd mid qoto dheer. Dhawr sano gudahood, naasigii waxay dileen dimoqraadiyad iyo abuurtay dawlad hal xisbi wadarta.
Nolosha malaayiin reer Jarmal ah ayaa la beddelay, qaarna way fiicnaayeen, qaar badanna way sii xumaadeen. Haweenka Waxaa lagu amrey in dib loogu soo noqdo guriga oo laga saaro siyaasada iyo goobta shaqada. Carruurta waxaa lagu qalday fikradaha iyo qiimayaasha Naasinimada. Iskuulada iyo goobaha shaqada ayaa loo beddelay si loo fuliyo ujeeddooyinka Nazi. Daciif ah ama rabshad bulsheed ama kooxo cunsurinimo - laga bilaabo Yuhuudda si ay u maskaxda ka jiran - laga saaray ama laga saaray.
Naasiyiintu sidoo kale adduunka ayay ku dacweeyeen dib u soo noolaynta milatariga galloping kaas oo Jarmalka u horseeday Dagaalkii Dunida Labaad labaatan sano kahor. Ugu dambeyntii, dabayaaqadii 1930s, Hitler wuxuu dejiyay ballaarinta dhulalka Jarmalka, siyaasad u horseeday dagaalkii ugu dhimashada badnaa taariikhda aadanaha.
Websaydhka 'Alpha History's Nazi Germany' waa macluumaad dhameystiran oo tayo leh oo buugaagta ah oo loogu talagalay barashada daraasadda Nazis iyo Jarmalka ee u dhexeeya 1933 iyo 1939. Waxay ka kooban tahay boqolaal ilo hoose iyo dugsi sare oo kala duwan, oo ay kujirto faahfaahin soo koobid mowduuc iyo documents. Websaydhkeenna sidoo kale waxaa ku jira waxyaabo tixraac ah sida waqtiyada, Qaamuusyada ereyada, a 'yaa yaa' iyo macluumaad ku saabsan taariikh nololeed. Ardaydu sidoo kale waxay ku tijaabin karaan aqoontooda oo ay dib ugu soo celin karaan howlo badan oo khadka tooska ah, oo ay ka mid yihiin su'aalaha, cinwaannada ereyga iyo Erey-bixin. Dhinacyada ilaha aasaasiga ah, dhammaan waxyaabaha ku jira Taariikhda Alfa waxaa qoraa macallimiin aqoon iyo khibrad leh, qoraayaal iyo taariikhyahanno.
Marka laga reebo ilaha aasaasiga ah, dhammaan waxyaabaha ku jira boggan internetka waa "Alpha Taariikh 2019. Waxyaalahaan lama koobi karo, lama daabicin karo ama dib looma qeybin karo iyadoon la helin ogolaanshaha muuqda ee Taariikhda Alfa. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan isticmaalka bogga Alfa Taariikhda iyo waxyaabaha ku jira, fadlan tixraac kuwayaga Shuruudaha Isticmaalka.
Yaa ah kan
Su'aalaha xulashada badan
Dagaalkii Dunida I